Izimo Ezijwayelekile Zenkontileka Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Imibandela ejwayelekile yokuthola izinkontileka
Ngaphambi kokuqasha noma yiziphi izinsizakalo esizibeka ezandleni zakho kule webhusayithi, kubalulekile ukuthi ufunde imigomo nemibandela esebenza ekuhlinzekweni kwezinsizakalo ezinikezwa ngabalandeli.ukubonakaliswa komsebenzi wakho oyinhloko wokuchaza imikhiqizo noma izinsiza : Ukuthengiswa kwemikhiqizo ngefomethi yedijithali nezinsizakalo zokumaketha online.
Umsebenzisi angafinyelela kuphela futhi aqashe lezi zinsizakalo zabalandeli.online ngemuva kokufunda nokwamukela lezi zimo zenkontileka.
Ngokwamukela le mibandela, umsebenzisi uboshwe yile migomo, yona, nenqubomgomo yobumfihlo, elawula ubudlelwane bethu bebhizinisi.
Uma ungavumelani nanoma iyiphi ingxenye yemigomo, ngeke ukwazi ukuqasha izinsizakalo ezinikezwayo.
abalandeli.online inelungelo lokushintsha noma lokushintsha lemibandela nganoma yisiphi isikhathi. Uma ukuguqulwa kubandakanya ushintsho olukhulu ngokwemibandela, abalandeli.online bazokwazisa ngokuthumela isimemezelo kule webhusayithi.
Izinsizakalo ezinikezwayo zitholakala kuphela kubantu basemthethweni nakubantu abaneminyaka okungenani eyi-18.
Le migomo ibuyekeziwe okokugcina ngomhla ka-14/04/2016
Ngokuya ngezinhlinzeko zoMthetho 34/2002 wezinsizakalo ze-Information Society and Electronic Commerce (LSSICE), imininingwane elandelayo iyanikezwa:
Igama leNkampani ngu: Online SL
• Ukukhonjwa ku-AGPD: "Abasebenzisi nababhalisile bewebhu" "Amakhasimende nabahlinzeki".
• Umsebenzi wezenhlalo uwukuthi: izinsiza zokumaketha online.
Izinsizakalo ezinikezwe kule webhusayithi
abalandeli.online yenza ukuthi kutholakale izinsizakalo ezilandelayo ngokuya ngemibandela ethile yezinkontileka zabo:
• Ukwakhiwa kwamasu wokuxhumana ku-inthanethi / ungaxhunyiwe ku-inthanethi.
• Ukubhala ukukhishwa kwemishini yabezindaba nokuthumela ezweni noma kwahlukaniswa izingxenye.
• Ukubhala kokuqukethwe okuhlanganisiwe.
• Ubudlelwano nabezindaba nabenzeli.
• Ukuthwebulwa kwezithombe zedijithali kwabezindaba, kwewebhu nezehlakalo.
• Ukubuyiselwa okuyisisekelo ku-JPG nokuthuthukiswa kwe-RAW.
• Ukuqeqeshwa okuyisisekelo kwezithombe zedijithali.
• Ukubonisana kwe-SEO kuwebhu, ibhulogi kanye ne-e-Commerce.
• I-SEO eyisisekelo yokuqukethwe kwewebhu.
• Ukuhlaziywa nokwakhiwa kwephrofayli yezixhumanisi (ekhasini le-SEO).
• Ukufaka, ukumisa nokwenza kahle kwe-WordPress noma iJoomla.
• Ukuqukethwe kokuqukethwe: amaphephandaba, omagazini, izinhlu zezincwadi, izincwadi, izincwajana, i-pdf ne-ebook,
• Idizayini eyisisekelo yamaphosta, amakhadi, amafulethi, amabhanela ne-CTA yewebhu.
Ukumaketha kokuqukethwe nokumaketha okungaphakathi
• Ukuhlelwa kwamasu nokuhlelela umphakathi.
• Ukubhala kokuqukethwe kwama-blog, amawebhusayithi noma ama-microsites.
• Ukuphathwa kwamaphrofayela nokuqukethwe komphakathi (i-Facebook, i-Twitter, i-Pinterest, i-YouTube, iTuenti, i-Google +)
• Imikhankaso ye-SEM (AdWords, Izikhangiso ze-Facebook, Izikhangiso ze-Twitter)
• Izindaba kanye nenkulumo yokukhangisa.
• Ukulawulwa kwezobuchwepheshe kwamatafula e-analog.
Njengombandela ukunikezela izinkonzo ezinikezwayo, uyacelwa ukuba ubhalise kwifomu elihambisanayo labalandeli.online futhi unikeze imininingwane yokubhalisa. Imininingwane yokubhalisa oyinikezayo kumele ibe eqondile, ephelele futhi ibuyekezwe ngaso sonke isikhathi. Ukwehluleka ukwenza lokhu kufaka ukwephulwa kwemigomo, okungahle kuholele ekuchithweni kwenkontileka nabalandeli.online.
Isixazululo seqembu lesithathu
Amanye amasevisi angafaka izixazululo zomuntu wesithathu. following.online inganikeza izixhumanisi kumawebhusayithi wenkampani yangaphandle njengabalingani abahlotshaniswa nabalandeli.online ekunikezelweni kwemisebenzi ethile.
Ubuye uvume ukuthi Insizakalo ingafaka izisombululo zokuphepha ezikhawulela ukusetshenziswa nokuthi kufanele usebenzise lezi zinsizakalo ngokuya ngemithetho yokusebenzisa esekwe ngabalandeli.online kanye nabalingani bayo bezokuphepha nokuthi okunye okunye ukusetshenziswa kungadala ukwephulwa kwe-copyright.
Kuyenqatshelwa ukuguqula, ukugwema, injineli eguqukayo, ukubola, ukuqaqa noma ukuguqula nganoma iyiphi indlela ubuchwepheshe bokuphepha obunikezwe abalandeli.online nganoma yisiphi isizathu.
Ukwephulwa kokuphepha kohlelo noma inethiwekhi kungahle kube nomphumela esikweletini somphakathi noma sobugebengu.
Amanani nezindlela zokukhokha
Uyavuma ukukhokha izinsizakusebenza ezifakwe kubalandeli.online ngezindlela zokukhokha ezamukelwa abalandeli.online nanganoma iyiphi imali ephelele (kufaka phakathi izintela nezindleko zokukhokha sekwedlule isikhathi, njengoba kufanele)
Ukukhokha kuhlale kungu-100% kusengaphambili futhi izinsizakalo zizohlinzekwa lapho siqinisekisa inkokhelo.
Amanani asetshenziswa kumkhiqizo ngamunye kanye / noma kwensizakalo yilawo akhonjiswe kwiwebhusayithi ngosuku loku-oda, kufaka phakathi, lapho kusebenza khona, yonke i-VAT (Intela Yezengezo Ecacisiwe) yokuthengiselana ngaphakathi kwendawo yaseSpain.
Uhlelo oluvamile lwentengo olungezwe intela ye-European Union
Ngokuya ngezinhlinzeko zoMthetho 37/1992, wangoDisemba 28, olawula uthe intela ne-European Directive 2008/8 / EC, ukusebenza kungaxolelwa noma kungaphansi kwawo kuya ezweni ohlala kulo umthengi kanye nesimo lapho kusebenza khona okufanayo (usomabhizinisi / uchwepheshe noma umuntu ngamunye). Ngenxa yalokho, kwezinye izimo intengo yokugcina ye-oda ingashintshwa maqondana nalokho okushiwo kuwebhusayithi.
Intengo yezinsizakalo noma i-infoproductos ethengiswa abalandeli.online ifaka i I-Spanish VAT. Noma kunjalo, intengo yokugcina ye-oda lakho ingahluka ngokuya ngesilinganiso se-VAT esisebenza ku-oda. Ama-oda amiselwe amanye amazwe e-European Union, Kuzodonswa i-VAT yaseSpain futhi kuzosetshenziswa inani lentela le-VAT elihambisana nezwe lapho uya khona. Intengo yokugcina izovela ngesikhathi sokuqinisekiswa kwe-oda lakho futhi izobonisa inani le-VAT elihambisana nezwe lokuya imikhiqizo.
Amanani Wezinsizakalo angashintsha nganoma yisiphi isikhathi ngokubona okukhethekile kwabalandeli.online. Izinsizakalo azihlinzeki ngokuvikelwa kwentengo noma ukubuyiselwa kwemali esimweni sokuncishiswa kwentengo noma okunikezwayo okuphakanyisiwe.
abalandeli.online yamukela lezi zindlela zokukhokha:
Ukuthobeka kokusekelwa nokusetshenziswa okunengqondo
Izinsizakalo kumele zicelwe ngeziteshi ezifanele ukutholwa futhi ziphendulwe ngaphakathi kwesikhathi esifanele.
Lezi ziteshi zingamafomu afanele atholakala kunsizakalo ngayinye enikezwayo.
Isicelo ngasinye sincike ekuhlolweni nasekwamukelweni ngabalandeli.online.
balandeli.online inganikeza ezinye izixazululo eklayenti kufaka nokudluliselwa kunethiwekhi yabalingani be-otsatira.online.
Ukusetshenziswa kwesigaba isigatshana
Igama "elingenamkhawulo" likhonjelwe kusigatshana sokusetshenziswa okufanele. Incazelo yokusetshenziswa okufanele inqunywa abalandeli.online, ngokubona kwayo okukhethekile. Amakhasimende abalandeli.online ababheka ukuthi bayayisebenzisa kabi le nsizakalo bazothintwa ngabalandeli.online.
abalandeli.online unelungelo lokumisa insizakalo uma sibheka ukuthi idlula isigatshana sokusebenzisa esifanele.
abalandeli.online ngeke iqinisekise ukuthi ukutholakala kwesevisi yale nkontileka kuyaqhubeka futhi kungaphazanyiswa, kanye nokulahleka kwemininingwane ebanjelwe kumaseva ayo, ukuphazamiseka kwemisebenzi yokuthengisa noma yimuphi umonakalo osuselwa ekusebenzeni kwezinsizakalo, noma okulindelwe kukhiqizwe iKlayenti, ngenxa:
1. Izimbangela ezingaphaya kokulawulwa kwabalandeli.izimbangela ezixhumene nolayini kanye nezinhloso ezithile kanye / noma ezinkulu.
2. Ukwehlukaniswa okubangelwa ukusetshenziswa okuyiphutha yiKhasimende, ikakhulukazi lokho okuthathwe kwinkontileka yensizakalo engafanele yohlobo lomsebenzi nokusetshenziswa okwenziwe yiKhasimende kanye / noma ngabantu besithathu ngewebhusayithi yayo.
3. Ukuma okuhleliwe kanye / noma ukushintshwa kokuqukethwe okwenziwe yisivumelwano phakathi kwezinhlangano zokugcina noma ukwenziwa kwezenzo ezihlukile obekuvunyelenwe ngazo ngaphambili.
4. Amagciwane, ukuhlaselwa kwekhompyutha kanye / noma ezinye izenzo zabantu besithathu ezidala ukuthi kungenzeki ngokuphelele noma okuyingxenye kokuhlinzeka ngezinsizakalo.
5. Ukusebenza okungalungile noma okungalungile kwe-Intanethi.
6. Ezinye izimo ezingalindeleki.
Ngale ndlela, iKlayenti liyavuma ukuthwala lezi zimo ngaphansi kwemikhawulo efanelekile, lapho lizimisele ngokusobala ukuthi lifune noma yimuphi umthwalo wesivumelwano noma owengeziwe wenkontileka kwa-Online SL ngokuhluleka, amaphutha nokusetshenziswa kwensizakalo enenkontileka.
I-Online SL ngeke ibhekane nanoma ikuphi ngamaphutha noma ngomonakalo owenziwe ukungasetshenziswanga kahle nokukholeka kokusetshenziswa kwensiza yiKlayenti. Futhi i-Online SL ngeke ibhekane nemiphumela emikhulu noma emincane ngenxa yokuntuleka kokuxhumana phakathi kwe-Online SL neKlayenti lapho kubangelwa ukungasebenzi kwe-imeyili enikeziwe noma ukukhohliswa kwedatha enikezwe iKlayenti kubhalisi lomsebenzisi lwabalandeli. .
Izimbangela zokuchithwa kwenkontileka
Ukuchithwa kwenkontileka yesevisi kungenzeka nganoma yisiphi isikhathi noma yiliphi iqembu.
Awuphoqelekile ukuthi uhlale nabalandeli.online uma ungagculisekile ngomsebenzi wethu.
abalandeli.online inganqamula noma imise okwesikhashana noma yiziphi zonke izinsizakalo ezifakwe kwisivumelwano nabalandeli.online ngokushesha, ngaphandle kwesaziso sangaphambilini noma isikweletu, uma ungahambelani nemibandela ebekwe lapha.
Lapho kuchithwa inkontileka, ilungelo lakho lokusebenzisa izinsizakalo lizophela ngokushesha.
Lokhu okulandelayo kuzoba yizimbangela zokuchithwa kwenkontileka:
• Ukuqamba, okuphelele noma okuyingxenye, kwemininingwane enikezwe ngenkathi kusenziwa noma iyiphi insiza.
• Guqula, bamba, uguqule emuva unjiniyela, ukubola, ukuqaqa noma ukuguqula nganoma iyiphi indlela ubuchwepheshe bokuphepha obunikezwe abalandeli.online.
• Futhi amacala wokuhlukunyezwa kwezinsizakalo zokusekelwa ngenxa yemfuneko yamahora amaningi kunalawo asungulwe kwisivumelwano.
Ukuchithwa kusho ukulahleka kwamalungelo akho ngensizakalo esayiniwe.
Ukuqina kwamanani nokunikelwayo
Izinsizakalo ezinikezwa kuwebhu, kanye namanani entengo yalokhu, azotholakala ukuze athengwe ngenkathi ikukhathalogi yezinsizakalo eziboniswe kuwebhusayithi. Abasebenzisi bayacelwa ukufinyelela ezinhlotsheni ezibuyekeziwe zewebhusayithi ukugwema amaphutha entengo. Kunoma ikuphi, ama-oda ayaqhubeka azogcina izimo zawo ezinsukwini eziyi-7 kusukela esikhathini sokumiswa kwawo.
Ukuhoxiswa yilokho amandla omthengi wento enhle ukuyibuyisela ekuhwebeni kungakapheli isikhathi esingokomthetho sezinsuku eziyi-14, ngaphandle kokuthi ufake isimangalo noma unikeze noma iyiphi incazelo noma uthole inhlawulo.
Ilungelo lokuhoxa kungenzeka lingaqashwa (ngaphandle kwephutha noma isici emkhiqizweni noma kwensizakalo enikezwe yona), kumacala alandelayo anikezwe yi-athikili engu-45 yoMthetho Wezentengiso:
• Izinkontileka zokuhlinzekwa kwezimpahla ezenziwe ngokuya ngemininingwane yomthengi noma eyenziwe umuntu uqobo, noma leyo, ngokwemvelo yayo, ayikwazi ukubuyiselwa noma ingahle ichitheke noma iphelelwe yisikhathi ngokushesha.
• Izinkontileka zokulethwa kokuqoshwa komsindo noma kwevidiyo, ama-disc nezinhlelo zekhompyutha ezingavulwa ngumthengi, kanye namafayela wekhompyutha, anikezwe nge-elekthronikhi, angalandwa noma aphinde akhiqizwe ngokushesha ukuze asetshenziswe unomphela.
• Futhi ngokuvamile yonke leyo mikhiqizo ithunywe kude okwenziwe isilinganiso sethu: izembatho, ukuthuthukiswa kwezithombe, njll., Noma ezithintekayo ekukopisheni (izincwadi, umculo, imidlalo yevidiyo, njll.).
Isikhathi sokuhoxa ku imikhiqizo yokuqukethwe yedijithali (njengezincwadi zedijithali), kuzomiswa ngesikhathi lapho kusetshenziswa izinkinobho zokufinyelela kokuqukethwe kwedijithali.
Ilungelo lokuhoxa, ngokuya nge-athikili 103.a yomthetho 1/2007, ngeke lisebenze ekunikezelweni kwezinsizakalo, uma ngabe insizakalo isiqediwe ukwenziwa ngokuphelele, lapho umsebenzi usuqalile, ngemvume ebekiwe ngaphambili. umthengi nomsebenzisi futhi ngokubona kwakhe ukuthi uyazi ukuthi, uma inkontileka isenziwe ngokuphelele ngabalandeli.online, uzobe elahlekelwe ilungelo lakhe lokuhoxa.
Ngemuva kokwamukela ukwenziwa kwemisebenzi ebisenziwe, abalandeli.online, bazokwazisa ngosuku lokuqala lwabo.
Uma ilungelo lokuxazulula liyasetshenziswa Izinsuku ze-10 Ngaphambi kokuqala kwensiza, abalandeli.online bazobuyisela imali abayitholile ngaphandle kokugcinwa futhi bangaze emva kwezinsuku eziyi-14. Ukube ilungelo elingaphezulu lalisetshenzisiwe ku isikhathi esingaphansi kwezinsuku eziyi-10, I-50% yemali ezobuyiselwa, futhi uma isetshenziswa kamuva, akukho mali izokhokhwa.
Ngokufanayo, abalandeli.online bangaqhubeka nokuqeda inkontileka uma inkokhelo ehambisanayo ingenziwe umsebenzisi noma ezinye zezenzo ezichazwe esigabeni ngezizathu zokuchithwa kwenkontileka zitholwe.
Ungahoxisa kanjani inkontileka yesevisi
Uma ufisa ukukhansela inkontileka yakho nabalandeli.online, kufanele usithinte ngesicelo sokususa inkontileka ngaphambi kokuthi inkonzo yenkontileka iqale ukusebenza (bheka inqubo nefomu lokuhoxa ngezansi)
abalandeli.online iqinisekisa ikhasimende ukubuyiselwa kwemali esetshenzisiwe esikhathini sezinsuku eziyishumi nane (14) zekhalenda elibalwe kusukela ngosuku lokuxhumana oluthembekile lokusebenzisa ilungelo lakhe lokuhoxa inqobo nje uma lokhu kufinyelela izidingo futhi kwamukelwe abalandeli.online.
Uma ungahoxiswa nguwe, sizobuyisela yonke imali oyikhokhile osenzele yona ngaphandle kokulibaziseka okungafanele futhi, noma kunjalo, kungakadluli izinsuku eziyi-14 zekhalenda kusukela ngosuku sitshelwe ngalo ngesinqumo sakho sokuhoxa yale nkontileka futhi inqobo nje uma sekwazisiwe izinsuku eziyi-10 ngaphambi kosuku lokuqala kwemisebenzi yenkontileka.
Sizoqhubeka nokwenza ukuthi imali ebuyiselwe isebenzise izindlela ezifanayo zokukhokha ezisetshenziswe ngumsebenzi wokuqala, ngaphandle kokuthi unikeze ngokuhlukile; Kunoma ikuphi, ngeke uthole izindleko ngenxa yokubuyiselwa kwemali.
Uma insizakalo okuyiyona nto yale nkontileka iqalile ngesikhathi sokuhoxiswa (izinsuku eziyi-14), ngokuya nge-athikili 108.3 yoMthetho 1/2007, i-Online SL ingagcina ingxenye elingana ehambisana nensizakalo enikeziwe, kufaka phakathi insizakalo yokusekela futhi, esimweni lapho insizakalo inikezwe ngokuphelele, ngokuya nge-athikili 103.a yomthetho oshiwo ngenhla, ilungelo lokuhoxa ngeke lisebenze.
Ukubuyisa okuhambelana nezinkokhelo ezenziwe nge-PayPal noma i-Stripe kuzokwenziwa ngesiteshi esifanayo, ngenkathi noma yiluphi olunye uhlobo lwembuyiselo luzokwenziwa ngokudluliselwa kwebhange kwi-akhawunti enikezwe ikhasimende. Ukubuyiselwa kwemali kufanele kwenziwe ezinsukwini zekhalenda eziyi-14 ezilandelayo kusukela ngosuku esaziswe ngalo ngesinqumo sakho sokuhoxa.
Zonke izinsizakalo esikunikeze zona, ngemvelo yazo, zizosinda lapho kubhidlizwa ngokuphelele, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, ukunikezwa kwempahla, abahlanguli bezimali, isinxephezelo kanye nokulinganiselwa kwesikweletu.
Funa isimangalo noma ifomu lokuhoxa
Umsebenzisi / umthengi angasazisa ngesimangalo noma ukuhoxiswa, kungaba nge-imeyili ku: info (at) abalandeli.online noma ngeposi ekhelini eliboniswe kwifomu lokuhoxa.
Kopisha bese unamathisela leli fomu ngeZwi, uligcwalise bese ulithumela nge-imeyili noma ngeposi.
Ukunakwa kwe-Online SL
info (at) abalandeli.online
Ngalokho-ke ngikwazisa ukuthi ngifuna / ngihoxisa kwinkontileka yokuthengiswa kwale elandelayo / ukuhlinzekwa kwenkonzo elandelayo:
Waqasha usuku: ………….
Uma kwenzeka ukhala, bonisa isizathu:
UMA UNGAVUMA I-CRSIT YOKUXHUMANISA imali yokuthenga okwenziwe kude, faka lo mbhalo olandelayo kwisaziso sakho sokuhoxa:
Uyaziswa futhi ukuthi ngokwe-athikili 29 yoMthetho 16/2011, we-June 24, izivumelwano zesikweletu, ukuthi, njengoba ngihoxile ekunikezelweni kwezinkontileka zezimpahla / nezinsizakalo futhi ngixhaswe ngemali ngokuphelele / ngokwengxenye ngesikweletu esixhunyiwe, Ngeke ngisaboshwa isivumelwano sesivumelwano sesikweletu ngaphandle kwenhlawulo.
Okulandelayo, bonisa igama lakho njengomthengi nomsebenzisi noma wabathengi nabasebenzisi:
Manje bonisa ikheli lakho njengabathengi nabasebenzisi noma labasebenzisi nabasebenzisi:
Khombisa usuku ofuna ngalo / ukhansele inkontileka ngalo:
Sayina isicelo sakho sokufuna / sokuhoxa uma waziswa ku-Online SL ngefomethi yephepha
(indawo), kuye ku ………………………………………………………… 20 kwezingu-XNUMX…
Ukubuyiselwa kwemali kufanele kwenziwe kungakapheli izinsuku eziyi-14 zekhalenda ukusuka ngosuku okuvunyelwe ngalo ukubuyiselwa kwemali yakho.
Imithetho Yabasebenzisi BaseYurophu
IKhomishini yaseYurophu idale isiteji sokuqala saseYurophu sokuxazululwa kwezingxabano kwezentengiselwano eziku-inthanethi ezimbozwe umthetho wakamuva wabathengi. Ngalo mqondo, njengesibopho sezingxenyekazi zokuthengisa eziku-inthanethi, sinomsebenzi wokwazisa abasebenzisi bethu ngobukhona besikhulumi esiku-inthanethi sokuxazulula ezinye izingxabano.
Ukuze usebenzise iplatifomu yokulungisa izingxabano, umsebenzisi kufanele asebenzise isixhumanisi esilandelayo: http://ec.europa.eu/odr
Ngokuya nge-Organic Law 15/1999, kaDisemba 13, ku-Protection of Personal Data, i-Online SL yazisa umsebenzisi ukuthi kukhona ifayili ledatha lakhe elibizwa ngokuthi "Amaklayenti / Abahlinzeki" elenziwe futhi ngaphansi kwesibopho sika I-Online SL enezinhloso ezifanele zokwelashwa phakathi kwazo yilezi:
1. a) Ukuphathwa kobudlelwano bezomthetho nezomnotho phakathi kobamba kanye namakhasimende akhe.
2. b) Ukuphathwa kwenkontileka yesevisi nekhasimende.
Ngokwezinga eligunyazwe iqembu elinentshisekelo; ngokuba isibopho somsebenzisi ukunemba okufanayo.
Uma kungashiwwanga okuphambene nalokho, umnikazi wedatha uvumelana ngokusobala ngokuphelele ekucutshungweni okuphelele noma okuyingxenye kokugunyazwa kwemininingwane eshiwo ngaleso sikhathi esidingekayo ukufeza izinhloso ezichazwe ngenhla.
Abakwa-Online SL bazibophezele ekufezeni isibopho sabo semfihlo semininingwane yomuntu nomsebenzi wabo wokuyigcina, kanye nokwamukela izindlela zokuphepha ezidingwa ngumthetho osebenzayo ukuvimbela ukushintsha, ukulahleka, ukwelashwa noma ukufinyelela okungagunyaziwe, njalo ngokwesimo sobuchwepheshe obutholakalayo.
Umsebenzisi angaqondisa ukuxhumana kwakho futhi asebenzise amalungelo okufinyelela, ukulungiswa kabusha, ukukhanselwa nokuphikiswa nge-imeyili: info (at) otsatira.online kanye nobufakazi obuvumelekile emthethweni, njengefotokopi ye-DNI noma okulinganayo, okubonisa kusihloko esithi " UKUVIKELA IDATHA ”.
Lemibandela ingaphansi kwe inqubomgomo yobumfihlo ye-Online SL.
Yonke imininingwane nemibhalo esetshenzisiwe ngenkathi kwenziwa izinkontileka, ukuthuthukiswa kanye nokwenziwa kwezimo zesivumelwano ezilawula ubudlelwano phakathi kwe-Online SL neKlayenti kuyimfihlo. Imininingwane eyimfihlo ngeke iqondwe njengaleyo edalulwe ngesivumelwano phakathi kwamaqembu, lokho okuphumela obala ngesizathu esifanayo noma lokho okufanele kudalulwe ngokuya komthetho noma ngesinqumo sokwahlulela kwesiphathimandla esifanele, nalokho okutholwe umuntu wesithathu ongekho ngaphansi kwesibopho semfihlo. Womabili la maqembu abophezelekile ukuhambisana nomsebenzi wobumfihlo nokuwugcina isikhathi esiyiminyaka emibili (2) ngemuva kokuphela kwalezi zivumelwano zesivumelwano esishiwo ezilawula ubudlelwano be-Online SL neKlayenti.
Yonke imininingwane etholwe iklayenti, noma ngabe yizithombe, imibhalo, idatha yokufinyelela efana nabasebenzisi namaphasiwedi we-WordPress, ukusingathwa noma abanye, kuzophathwa ngemfihlo, ukudluliselwa kubantu besithathu akuvunyelwe nakancane uma sinemvume yakho njalo inhloso efanayo lapho idatha itholakele.
abalandeli.online ligodla ilungelo lokwenza, ngasiphi isikhathi futhi ngaphandle kwesaziso sangaphambilini, ukuguqulwa nokubuyekezwa kulwazi oluqukethwe kwiWebhusayithi, ukumiswa nokwethulwa, imibandela yokufinyelela, imibandela yenkontileka, njll. . Ngakho-ke u-USER kufanele afinyelele izinhlobo zekhasi ezibuyekeziwe.
Akunakulandeli abalandeli.online libhekele noma yikuphi ukwephulwa kwenkontileka okwenzeka kuwe, ukunganaki maqondana nesiza, insizakalo noma yikuphi okuqukethwe, nganoma iyiphi inzuzo elahlekile, ukulahleka kokusetshenziswa, noma ukulimala kwangempela, okubalulekile, okungaqondile, okwenzekile, okujezisayo noma okubalulekile kwanoma yiluphi uhlobo olususelwa ekusetshenzisweni kabi kwakho ngamathuluzi anikezwe.
Umthwalo wemfanelo wabalandeli.online kuphela, kuzoba ukuhlinzeka ngenkonzo yokuhlinzekisa izinkontileka ngaphansi kwemibandela nemibandela evezwe kule nqubomgomo yesivumelwano.
abalandeli.online ngeke ibe nesikweletu kunoma yimiphi imiphumela, ukulimala noma ukulahleka okungavela ekusetshenzisweni okungalungile kwemikhiqizo noma izinsizakalo ezinikeziwe.
Impahla yezobuhlakani nezimboni
I-Online SL ingumnikazi wawo wonke amalungelo empahla yezimboni nawengqondo ekhasi labalandeli. Ekhasini eliku-inthanethi, nangezinto eziqukethwe kulo, phakathi kwazo kukhona omagazini abalandekayo kuwebhu.
Akuvunyelwe neze ukuguqula, ukudlulisa, ukusabalalisa, ukusebenzisa kabusha, ukudlulisa noma ukusebenzisa konke noma ingxenye yokuqukethwe kwekhasi ngezinjongo zomphakathi noma ezentengiso ngaphandle kwemvume ye-Online SL.
Ukwephulwa kwanoma yiliphi elinye lamalungelo angenhla okungenhla kungahle kube ukwephula lezi zinhlinzeko, kanye necala lokujeziswa kobugebengu ngokuhambisana nezobuciko. 270 et seq. yeKhodi Yobulelesi yamanje.
Esimweni lapho umsebenzisi efisa ukubika noma yisiphi isigameko, abeke amazwana noma enze isimangalo, angathumela i-imeyili ku-info (at) abalandeli.online ekhombisa igama nesibongo sabo, insizakalo ithengiwe futhi isho nezizathu zokufuna kwabo.
Ukuxhumana ne-Online SL noma ukuphakamisa ukungabaza, umbuzo noma isimangalo, ungasebenzisa noma yiziphi izindlela ezilandelayo:
I-imeyili: info (at) abalandeli.online
Ulimi lapho kuzoqedwa inkontileka phakathi kwabalandeli.online kanye neKhasimende kuyinto iSpanishi.
Ukulawula nemithetho esebenzayo
abalandeli.online kanye NOMSEBENZISI, bazobuswa ukuxazulula noma yikuphi ukuphikisana okungavela ekutholakaleni, noma ekusetshenzisweni kwale webhusayithi, ngomthetho waseSpain, futhi bahambise ezinkantolo nasezinkantolo zedolobha laseGranada.